Iindaba - Ityala elitsha loyilo lomfundi weBOOX Nova
Ityala elitsha le-BOOX nova 3 yokufunda umbala
Ngakumbi nangakumbi abantu bakhetha ukufunda i-ebook kwi-ereader. Kukulungele ukufunda uninzi lweencwadi kwesi sincinci se-ereader. Ungakhathazeki ukuphatha iincwadi ezinzima kakhulu, ezithatha indawo kunye nemali. Ngoku i-BOOX ereader yenye yezona zifundi zithandwa kakhulu. Iba ngumhlobo wakho osenyongweni emsebenzini nasekufundeni.
Nali ityala lethu elitsha loyilo lokufunda elinemisebenzi emininzi.
Eli tyala lidibanisa umtya wesandla, isiphatho sepensile kunye nokuma ukukhaba, kubamba umfundi wakho eme ngokuzinzileyo. Sikhulule isandla sakho xa ufunda, kunye nokusela ikofu. Ipenisi yokubamba iphethe usiba lwakho xa ungayisebenzisi.
Uyilo lweSitayile kunye nephepha elikhethiweyo le-PU lesikhumba esineemvakalelo zokuchukumisa. Kuhlala ixesha elide ukusebenzisa, khusela umntu okufundayo ixesha elide. I-microfiber yangaphakathi ayikrweleki, iyahambelana ngombala omnyama.
Ityala lixhasa ukulala ngokuzenzekelayo kunye nomsebenzi wokuvuka. Xa uvala isiciko, umntu otyayo uyavala.
Xa uvula isiciko, umntu okufundayo uvule ngokuzenzekelayo. Xa ungxamile ukuphuma, uza kulala, kulula ukugqiba ukufunda.
Ngomtya wesandla e-elastic, ityala likuvumela ukuba ulibambe ngesandla esinye. Ungayijonga ngesandla, kulula ukuyithatha naphina. Nantoni na wena nomntwana wakho, inokubamba ezandleni zakho ngokufanayo.
Ityala ngokuzenzekelayo livaliwe ngokuqinileyo. Ungakhathazeki malunga nemikrwelo ephuma kumaqhosha akho nakwezinye izinto ezibukhali. Igcina i-ereader yakho icocekile kangangeentsuku ezininzi.
Ityala lethwathwa lijikeleze umtya wakho wexabiso, likhusela ngokugqibeleleyo.
Gcina umntu ofundayo ekhuselekile kwidrop kunye nothuko.
Iya kuba ngumhlobo olungileyo womfundi wakho.
Ewe kunjalo, sinesinye isitayile semeko yokufundwa. Ezifana ne-slim kunye ne-lightweight case, i-silk case color color.
Kwaye imeko yokuma kwe-origami.
Unokukhetha okuninzi kumfundi wakho.
Yeyiphi indlela oyithandayo?